သွေး​နှောရင်​ အ​မေရိကန်​​လောက်​​တော့ လုပ်​ပါဗျာ - News @ M-Media
​သွေး​နှောရင်​ အ​မေရိကန်​​လောက်​​တော့ လုပ်​ပါဗျာ
in ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် — July 19, 2017
​မောင်​ဗညားတစ်​​ယောက်​ လဝကမှာမှတ်​ပုံတင်​ သက်​ပြည့်​သွားလဲသည်​။ လဝကမှ ဘိုးဘွားစဉ်​ဆက်​ အ​ထောက်​ထား​တောင်း၏။.
​မောင်​ဗညား ​ပေးနိုင်​၏ အ​ဖေရဲ့အ​ဖေဘက်​မှ ရှမ်းဗမာ​ ​ခေါ် ရှမ်းတလိုင်း (တိုင်းလိုင်​or ရှမ်းနီ)စပ်​၏။ အ​ဖေရဲ့ အ​မေဘက်​က ကရင်​+ကမာန်​ စပ်​ထား၏။
အ​မေဘက်​က​တော့ရှင်း၏ ကမာန်​နွယ်​၏ ။ သို့​သော်​လည်း ​ခေတ်​အဆက်​ဆက်​ ဗမာမှု ပြုကြမှု​ကြောင့်​ ​မောင်​ဗညား၏ ဘိုး​ဘေးဘီဘင်​များ လက်​ထက်​ ရုံးအ​ထောက်​ထား၌ပင်​ လူမျိုး ဗမာ ဟုအ​ဖြေထွက်​​လေ၏။ ဘိုး​ဘေးဘီဘင်​များအားလုံးသည်​ ၁၈၂၃ မတိုင်​မီ ​ရှေးရှင်​ဘုရင်​လက်​ထက်​ မင်းမှုထမ်းခဲ့​ကြောင်း. တပ်​မှုးများဖြစ်​​ကြောင်း ​ရှေ့မှီ​နောက်​မှီလူကြီးများက အမြဲ ​ပြောပြ၏။ ထို့​ကြောင့်​ မှတ်​ပုံတင်​ သက်​ပြည့်​လဲလှယ်​ရာမှာအဆင်​​ပြေမည်​ထင်​​နေသည်​ ။
တစ်​ဖန်​ ၁၉၈၂ နိုင်​ငံသားဥပ​ဒေ အရလည်း​ကောင်း ၊.အမိန့်​ညွှန်​ကြားချက်​များ အရလည်း​ကောင်း ၊ ​သွေး​နှောမဟုတ်​သည်​မှာ​ပေါ်လွင်​​နေ၍ လဲလှယ်​ဖြစ်​သည်​။ ဥပ​ဒေ ကိုပြည်​သူလိုက်​နာသလို ဝန်​ထမ်းလည်း လိုက်​နာမည်​ဟုအထင်​ကြီးခဲ့သည်​ကလည်းဖြစ်​နိုင်​သည်​။
ပထမဦးဆုံး မြို့နယ်​အဆင့်​လဝကနဲ့​တွေ့သည်​။ ကိုးကွယ်​ရာဘာသာ ကွဲလွဲမှု​ကြောင့်​ထင်​၏ ခရိုင်​သို့လွှဲသည်​။ ခရိုင်​မှလည်း တိုင်းအဆင့်​သို့လွှဲပြန်​သည်​။ တိုင်းအဆင့်​သို့သွား​ရောက်​​တွေ့ဆုံ​ကာ ကိုးကွယ်​ရာဘာသာ ​ကြောင့်​ ဤကဲ့သို့အဆင့်​ဆင့်​ လွှဲ​ပြောင်း​နေသည်​လား​မေး၏၊ မဟုတ်​ပါ​ဖြေ၏။ ​အောက်​​ခြေမြို့နယ်​မှုးနဲ့ မျိုးရိုးစဉ်​ဆက်​ အမှန်​ကန်​များ ကိုအစီရင်​ခံစာ​ရေးတင်​ခိုင်း၏။ ​မောင်​ဗညားနှင့်​မြို့နယ်​ဦးစီး ​ဆွေး​နွေးပြီး စီစဉ်​၏ ။
.မြို့နယ်​ဦးစီး မည်​ကဲ့သို့တင်​သည်​​တော့မသိ အချိန်​အ​တော်​ကြာ၏ ၂၀၁၆ နှစ်​ကုန်​ပိုင်းက အစပြုခဲ့သည့်​မှတ်​ပုံတင်​ကိစ္စ ၂၀၁၇​ ခုနှစ်​ ဂျူလိုင်​လ​ရောက်​လာ၏။ ဘာမှမထူးခြား ။.အမိန့်​ညွှန်​ကြားချက်​အရ ဆိုပါက ​သွေး​နှောများသည်​ပင်​ ရက်​၉၀ သာကြာရမည်​သတ်​မှတ်​ထား၏။ သို့နှင့်​​မောင်​ဗညားတစ်​​ယောက်​ citizen law ၊ ၂၀၀၈​ ဖွဲ့စည်းပုံ အခန်း ၈ နိုင်​ငံသားအခွင့်​​ရေး၊ အမိန့်​ညွှန်​ကြားချက်​များ၊ နိုင်​ငံသားများ၏ အခွင့်​​ရေး ကာကွယ်​​စောင့်​​ရှောက်​​ပေးသည့်​ ဥပ​ဒေ ၊ လဝက လုပ်​ထုံးလုပ်​နည်းများ ကို အသည်းအသန်​​လေ့လာရ၏၊ ဥပ​ဒေ များသာကုန်​၏ ဥပ​ဒေ မလိုက်​နာသူများက ပြည်​သူမဟုတ်​သည်​ကို​တွေ့လာရသည်​၊ ဒီလိုနဲ့ တိုင်းညွှန်​ကြား​ရေးမှုးက ​ခေါ်​တွေ့ပြန်​၏။.​မောင်​ဗညားတစ်​​ယောက်​ မှတ်​ပုံတင်​ ရပြီ အထင်​ဖြင့်​ သွား​ရောက်​​တွေ့ဆုံ၏။ လမ်းခရီး၌ မိုးမိပြီးမဖျားယုံတမယ်​ဖြစ်​၏။ အဝတ်​စားများ ဝယ်​ဝတ်​ရ၏။ ​နေ့လည်​က ​တွေ့ဆုံဖို့သွား​သော်​လည်း.ည​နေပိုင်းမှ​တွေ့ခွင့်​ရ၏။
​တွေ့ခွင့်​ရချိန်​မှစ၍ ဇာတ်​လမ်းကစသည်​။.ပုဒ်​မ ၅ အရ ထုတ်​​ပေးဖို့အတွက်​ အ​တော်​​ကြောက်​​နေပုံရ၏။ ရုပ်​သံသယ၊. နာမည်​သံသယ ​ကြောင့်​ တစ်​ခုခု​နှောမှ အဆင်​​ပြေမည့်​သ​ဘော​ပြောလာသည်​။ ​မောင်​ဗညားလည်း အ​ဖြေရှိသည်​ ကမာန်​တိုင်းရင်းသားများ ရုပ်​ရည်​နှင့်​ကျွန်​​တော့်​ရုပ်​ရည်​ကို ယှဉ်​ထိုးကြည့်​ပါက ၂ မျိုးလုံး သူတို့အ​ခေါ်ကုလားဆင်​ ဖြစ်​​နေသည်​။ ထို့​ကြောင့်​ရုပ်​သံသယဆိုသည့်​ ရည်​ညွှန်းချက်​​လေထဲ လွှင့်​ပျံသွားရှာသည်​။ တစ်​ဖန်​အဖိုးဖွားထဲမှ နာမည်​သံသယ ရှိဟုဆိုလာပြန်​သည်​။ မြို့ဝန်​ဘိုင်​ဆပ်​တို့က​ရော အမည်​သံသယ ရှိပါသလား ဦးရာဇတ်​က​ရော ​သွေး​နှောသလား​ပြန်​လည်​​မေးမြန်းပြီး ဥပမာ တစ်​ခုချပြရ၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်​သူတစ်​​ယောက်​သည်​​မောင်​ဖြူဖြစ်​မည်​ ။.​မောင်​ဖြူ.ကိုယ်​ရင်​ဝတ်​​သော်​ ဥူးဥတ္တမ ဘွဲ့ဖြစ်​မည်​။
ခရစ်​ယာန်​ တစ်​​ယောက်​ ​မောင်​နီဖြစ်​မည်​။ ဘာသာ​ရေးအရ ​ရောဘတ်​​မောင်​နီဖြစ်​သွားမည်​။
အစ္စလာမ်​တစ်​​ယောက်​ ​မောင်​ညိုဖြစ်​မည်​။ ဘာသာ​ရေးနာမည်​အရ ​အေဘရာဟင်​ဖြစ်​မည်​။
လူမျိုးတိုင်းမှာ ဘာသာ​ရေးနာမည်​ ကို ကိုးကွယ်​သည့်​ဘာသာအရ အမျိုးမျိုး.ဖြစ်​နိုင်​သည်​။ နာမည်​ကိုကြည့်​၍.​သွေး​နှောဆုံးဖြတ်​မည်​လား​မေးရ၏။.တိုင်းအရာရှိ အကြပ်​ တွေ့ဟန်​တူသည်​ ရုံးချုပ်​မှညွှန်​ကြားချက်​ကိုဖတ်​ပြမည်​ဆိုပြီး​စောင့်​ခိုင်း၏။. ခနအကြာတွင်​ဖတ်​ပြသည်​။ လူမျိုးအမှန်​ဖြင့်​မှတ်​ပုံတင်​ထုတ်​​ပေးရမည်​ဆို၏။ ဗညား​ပျော်​သွားသည်​။ လုပ်​ဗျာ လူမျိုးအမှန်​ဆိုမှ​တော့ ကမာန်​၊ကရင်​၊ ရှမ်း၊.ဗမာ.ကြိုက်​ရာ​ရေးပြီးထုတ်​​ပေး​တော့ဆို​တော့ တစ်​ခုခု​နှောမှအဆင်​​ပြေမည့်​သ​ဘော​​ဝေ့လည်​​ကြောင်​ပတ်​​ဖြေသည်​။ သူတို့​နှော​စေချင်​သည်​က အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်​ ၊.ဘင်္ဂလီ စသည့်​ ကိုယ်​မသိသည့်​တိုင်းပြည်​များဖြစ်​​နေသည်​။ ဒီ​တော့ဗညား က လူလည်​ ​နှော​စေချင်​ အဲ့နိုင်​ငံ​တွေ မလုပ်​ပါနဲ့ဗျာ အင်္ဂလန်​၊ အ​မေရိကန်​၊ ​နော်​​ဝေ.စတာ​တွေ ကို​နှော​ပေးဗျာ။.အဲ့သံရုံး​တွေကိုလည်းအ​ကြောင်းကြား​ပေး ဒါမင်းတို့ နိုင်​ငံသားအ​နှောလို့။
ဟုတ်​တယ်​​လေ ဗျာ.​နှောခြင်း​နှော လူကိုလူလိုမြင်​တဲ့ ဒီမိုက​ရေစီပြည့်​ဝတဲ့ နိုင်​ငံအ​နှောခံလိုက်​မယ်​
သို့​ပေမယ့်​တိုင်းအရာရှိ​ပြောလာတာက ရုံးချုပ်​ကိုသာသွားပါဗျာတဲ့။.​ဘောလီ​ဘော ပဲပုတ်​တာလား? မလုပ်​ရဲတာလား ​တော့ မသိဘူးဗျို့။.ကျုပ်​​တော့ တိုင်းရုံးက ​နေ ​အောင်​ဖျာလိပ်​ပြန်​ခဲ့ရတယ်​။
တိုင်းအရာရှိ​ပြောတာ​တွေအားလုံး ၁၉၈၂​.နိုင်​ငံသားဥပ​ဒေ အရလည်း​ကောင်း၊ ၂၀၀၈​ ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေ အရလည်း​ကောင်း မကိုက်​ညီတာကို​တွေ့လိုက်​ရတဲ့အပြင်​ ဝန်​ကြီးဌာနရဲ့ အမိန့်​ညွှန်​ကြားချက်​ကို ​ကျော်​လွန်​သည့်​သ​ဘော​တွေ့ရတယ်​။ အမိန့်​ညွှန်​ကြားချက်​အရ ခရိုင်​အဆင့်​တာဝန်​ရှိသူ​တောင်​ လုပ်​ပိုင်​ခွင့်​ ​ပေးထား​ပေမယ့်​ ​နေပြည်​​တော်​ကို တွန်းပို့​နေ၍ အလွန်​အံ့အားသင့်​မိပါတယ်​။ အမှန်​တကယ်​က ​အောက်​​ခြေအဆင့်​က ground ဆင်းစစ်​ပြီး ၅ ဦး​ကော်​မတီမှ တည်​ပြုထုတ်​​ပေးခွင့်​ထိ ချမှတ်​ထားပါလျက်​၊ ယခုလို ဟိုလွှတ်​ဒီလွှတ်​ ခိုင်း​စေခြင်း​ကြောင့်​ ကုန်​ကျစရိတ်​များလှသည်​။ထိုကုန်​ကျစရိတ်​များကို ပြည်​​ထောင်​စုအဆင့်​က အ​လျော်​​ပေးမည်​လား ၊.တိုင်းအဆင့်​က​ပေးမည်​လား၊ ခရိုင်​အဆင့်​က​ပေးမည်​လား မသိ​ချေ။ ​နေရာတကာပတ်​လွှတ်​​နေ၍ ​မောင်​ဗညားတစ်​​ယောက်​အမြင့်​ဆုံးအဆင့်​ ကုလသမဂ္ဂထိသွားနိုင်​ရန်​ အင်္ဂလိပ်​စကား​ပြော သင်​တန်းတက်​ရပါ​တော့မည်​။ ကုန်​ကျစရိတ်​များကလည်း အရင်းအနှီး တစ်​ခုသဖွယ်​ရှိ​နေသဖြင့်​ မည်​သူ့ကို အ​လျော်​​တောင်းရမည်​လည်း ? မှတ်​ပုံတင်​ ရရှိ​ရေး ကုလလုံခြုံ​ရေး​ကောင်​စီထိများလွှတ်​​နေမည်​လား အ​တွေးပွားရင်း.ပြည်​ပခရီးသွားရ​ရေး ​တွေးပြီး ငါဟဲ့ဗညား ဟုကြိမ်းဝါးကာ ကြိုးစားရ​ပေ​တော့သည်​။
ဗညား (or)​အောင်​နိုင်​ဝင်း (or) Saw Lynn Loon
**ဆောင်းပါးရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ၍ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Tags: Citizenship, Saw Lynn Loon, လဝက